Wasiir ku xigeenka difaaca DF oo Qarax lagu eegtay Muqdisho
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaashaandhiga, Cabdullaahi Colaad Rooble [Sawir hore]
MUQDISHO, Soomaaliya - Qarax Miino ayaa ka dhacay Nawaaxiga xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga oo ku taala degmada Dayniile ee gobolka Banaadir, sida ay Warsidaha Garowe Online u sheegeen dadka degaanka ee halkaasi ku nool.
Jugta qaraxa oo laga maqlay qaybo ka tirsan xaafadaha ku dhow dhismaha Wasaaradda ayaa waxaa la arkayay Uuro ka dhalatay Qaraxa oo cirka isku shiishareeraysay, inkasta oo aanan aanan la hubin illaa iyo haatan khasaaraha ka dhashay.
Bartilmaameedka weerarka wali lama xaqiijin, laakiin meel aan ka fogayn halka uu qaraxu ka dhacay oo ah dhabarka dambe ee dhismaha Wasaaradda waxaa marayay Kolanyo galbineysa Wasiir ku xigeenka Wasaaradda difaaca, Cabdullaahi Colaad Rooble.
Fahfaahinta ayaa intaas ku dareysa in Qaraxa kadib ay xireen dhamaan wadooyinka soo gala dhismaha Wasaaradda ciidamo ka tirsan dowladda, gaara ahaan Ilaaladda gaarka ah ee dhismaha, iyaga oo dadka u diidayay inay adeegsadaan.
"Inaga oo gudaha Wasaaradda ku jirna, ayaan maqalnay Qarax, kaasoo ahaa Miino lagu aasay dhabarka dambe ee dhismaha Wasaarada, ma caddeyn karo khasaaraha," Sarkaal magaciisa ka gaabsaday oo dowlada ka tirsan ayaa sidaasi u sheegay GO.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda Qaraxaan, balse, falalka noocaan ah ee Khal-khalka gelinaya amniga ee ka dhaca magaaladda caasimadda ah ee Muqdisho waxaa inta badan dhabarka saarta kooxda xiriirka la leh Al-Qaacidda ee Al-Shabaab.
Qaraxaan ayaa kusoo beegmayaa xili dhismaha Wasaaradda Difaaca dalka ay ka socotay xil wareejinta Taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka iyo Abaanduulaha ciidanka, kuwaasoo uu dib u habayn ku sameeyay todobaadkii hore Madaxwaynaha dalka.
Xogta Nin fuliyay qarax dad badan ku dilay Muqdisho oo la shaaciyay
Soomaliya 26.02.2018. 13:45
Qarax kowaad ayaa ahaa midka geestay Khasaaraha ugu badan guud ahaan weerarka...
Soomaliya 20.06.2018. 10:25
Soomaliya 22.01.2019. 16:21
Qarax Gaari oo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wararkii dambeeyay
Soomaliya 14.01.2019. 18:24